မန္တလေး နန်းတွင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ခွာခိုင်း
တင်ဆောင်ထားတဲ့ ကား ၁ စီး ဟာ မန္တလေး နန်းတွင်းကို ၀င်ရောက်ရာမှာ ကားမှန်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို တပ်လုံခြုံရေးက ခွာခိုင်းလို့ ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။
မတ် ၁၈ရက် ညနေက မန္တလေး နန်းတွင်းက မြနန်း စံကျော် ရွှေနန်းတော် ကို သွားရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့ အမေရိကန် လူမျိုး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေ တင်ဆောင်ထား တဲ့ ကား ၁ စီးဟာ ၁၉လမ်း အရှေ့ဘက်ပေါက် က အ၀င်မှာ အခုလို ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ခရီးသည်တွေ တင်ဆောင်လာတဲ့ ဒရိုင်ဘာ က သူကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံကို ပြောပြပါတယ်။
မုခ်ဦးကနေ ၀င်ပါတယ်။ ကားကို တားပါတယ်။ လူကြီး တားခိုင်းလို့ တားတယ် ဆိုတော့ ရပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မှန်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ပုံကို ခွာပေးပါလို့ ကျနော့်ကို ခိုင်းပါတယ်။ ကျနော်က ဗိုလ်ချုပ်ကို ရိုသေ လေးစားလို့ ကပ်ထားတာ။ ဘာဖြစ်လို့ ခွာပေးရမှာလဲလို့ မေးတော့ အရာရှိက ခွာခိုင်းလို့ပါတဲ့။ အဲဒီအရာရှိကို လွှတ်လိုက်လို့ ကျနော်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အရာရှိ ရောက်မလာပဲ တပ်သားတယောက် ရောက်လာပါတယ်။ မခွာရင် ၀င်မရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က ဗိုလ်ချုပ်က ကျနော်တို့ ဖခင်ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ သူ့ကို ခွာခိုင်းရတာလဲ ဆိုတော့ အထက်က ညွှန်ကြားထားလို့ပါတဲ့။ အထက်ကညွှန်ကြားတာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို ညွှန်ကြားတာလား။ တခြား စတစ်ကာတွေကို ညွှန်ကြားတာလား ဆိုတာ မေးပါတယ်။ မည်သည့် စတစ်ကာကို မဆို ကပ်ထားတဲ့ ကားတွေကို ခွာကို ခွာရမယ်လို့ ကျနော့်ကို အမိန့်ပေးထားလို့ ပါတဲ့။”
ရဲဘော်ကို သူ့ကားရှေ့က ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ တင်ထားတဲ့ ကား ၁ စီးမှာ ကပ်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကြော်ငြာ စတစ်ကာတွေ ကျတော့ ဘာလို့ မခွာလဲ မေးခွန်း ထုတ်ရာမှာ ပြန်မဖြေနိုင်ဘဲ၊ သူ့ကို နားလည်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်သွားတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ကပ်ထားတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ တံဆိပ် အမှတ်အသား စတစ်ကာကို ခွာပြီး နောက် ကျန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို မခွာဖို့ ပြောတာလဲ မရဘူးလို့ သူက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော့် ကားရဲ့ နောက်မှာ အန်အယ်ဒီကို မဲပေးပါဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတဦး လက်ထောင်နေ တဲ့ ပုံလေး ပါတယ်။ ခွာချင်ရင် နိုင်ငံခြားသားတွေ ရှေ့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ပုံတော့ မခွာနဲ့၊ နောက်မှာ အန်အယ်လ်ဒီ ဆိုတဲ့ တံဆိပ်ပါတယ်။ အဲဒီ တံဆိပ်ကို သွားခွာပါ ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီပုံကိုမှ ခွာချင်တာ။ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို ခွာခိုင်းတယ် ဆိုတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေက သိသွားပြီလေ။”
အရင်က အန်အယ်လ်ဒီပါတီ အမှတ်တံဆိပ် စတစ်ကာတွေ ကပ်ထားတဲ့ ကား ၁ စီးလဲ ဒီနေရာမှာ အလားတူ ခွာခိုင်းလို့ ခွာပေးခဲ့ရတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မန္တလေးမြို့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အပြီး နောက်နေ့မှာ အဲ့ဒီလို ခွာခိုင်းခဲ့တာပါ။
အခုတခါတော့ အန်အယ်လ်ဒီ တံဆိပ်အပြင် ကားရှေ့ လေကာမှန်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ၃ လက်မ ပတ်လည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံကိုပါ ခွာပေးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
3/20/2012 06:03:00 PM
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၀ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၏ မြို့တော် ပုသိမ်မြို့မှ ငပုတောမြို့သို့ ပြေးဆွဲနေသော ပုသိမ်သူ (၁၁) ရှပ်ပြေးရေယာဉ်သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်တွင် ငပုတောမြို့နယ် တစ်ဖက်ကမ်း ကံဆိပ်ကျေးရွာအနီး၌ နစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပုသိမ်မြို့ခံများနှင့် ငပုတောမြို့ခံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များအရ သိရသည်။ အဆိုပါ ပုသိမ်သူ ရေယာဉ်မှာ ပုသိမ်မှ သရက်တောကျေးရွာသို့ အသွား ငပုတော တစ်ဖက်ကမ်း ကံဆိပ်ကျေးရွာတွင် ကမ်းကပ်ရန် လှည့်ရာမှ တိမ်းမှောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ငပုတောမြို့နယ် ဆေးရုံသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်များအရ ရောက်ရှိလာသည့် လူလေးဦးတွင် တစ်ဦးမှာ သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သဘောင်္ပေါ်တွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် အပြည့်ပါဝင် လာကြောင်း ကနဦးသတင်း ရရှိထားသည်။
The Voice Weekly (facebook) သစ်ထူးလွင်
မြင်းခြံ NLD အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးကို SB က ခြိမ်းခြောက်
By ဇာဏီ၊ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးရေး ပြုလုပ်နေသည့် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် ကိုကိုနိုင် နေထိုင်တဲ့ ထနောင်းတိုင်ရွာက ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ အထူးရဲ သတင်းတပ်ဖွဲ့(SB)မှ ကိုကိုနိုင်၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က လာရောက် စုံစမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေသည်လို့ သတင်းရရှိပါသည်။
မဲဆန္ဒနယ်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးပေါခင်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ ဦးစိုးနိုင်ဝင်း၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီမှ ဦးအောင်သန်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီမှ ဦးစန်းထွန်း တို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီအတွက် ကိုကိုနိုင်ပါဝင်သည့် NLD လူငယ်အဖွဲ့တွေက နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ဝက်လူးကျေးရွာအပိုင်းကို တာဝန်ယူထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးရေး ဆင်းနေတာ ဖြစ်ပါသည်။
"ကျနော်တို့ မြင်းခြံက အဖွဲ့တွေကော ထောင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေကော NLD ပါတီအတွက်ကို ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးရေး ဆင်းနေကြတာပါ။ ကျနော်တို့က ကြိုးတချောင်းကို နောက်က တွန်းလို့မရလို့ ရှေ့က ဝင်ဆွဲပေးနေတဲ့ သဘောပါပဲ။ ကျနော်တို့ကို တိုက်ရိုက်လာမပြောပဲနဲ့ ဒါမျိုး လုပ်တာဟာ စည်းရုံးရေးဆင်းတာကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါက လူတယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို လိုက်ပြီးတော့ မိသားစုရော ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နေသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။"လို့ ကိုကိုနိုင်က ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါသည်။
ပတ်သတ်ပြီး ကိုကိုနိုင်မှ ပါတီ စည်းရုံးရေး တာဝန်ခံတဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာ ဝင့်သူကို သွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာ ဝင့်သူက မြင်းခြံမြို့နယ်မှ အထူးရဲ သတင်းတပ်ဖွဲ့(SB)မှ အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ဦးအောင်မင်းကို တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းသည့်အခါမှာတော့ ဦးအောင်မင်းက ခရီးထွက်နေသည့်အတွက် မသိရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် ကိုကိုနိုင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်အရ အိုးဖိုထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ တဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကိုကိုနိုင်ဟာ ဒေါက်တာ ဝင့်သူ၊ ကိုဝေဖြိုး၊ ကိုကြည်စိုး၊ ကိုမျိုးသန့်၊ ကိုမျိုးဟန်၊ ကိုစိုးရာဇာဖြိုး၊ ကိုသန်းထိုက်အောင်၊ ဦးနန္ဒဝံသတို့နှင့်အတူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အဖြူရောင် အင်္ကျီများ ဝတ်ဆင်ကာ မြင်းခြံမြို့ရှိ ဘုရားကြီးသို့ သွားရောက်၍ ဝတ်ပြုဆုတောင်းသည့် အဖြူရောင် ကမ်ပိန်း လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာလအတွင်း အထူးရဲ သတင်းတပ်ဖွဲ့ (SB)မှ နေအိမ်တွင် လာရောက်ဖမ်းဆီးပြီး အီလက်ထရောနစ် အက် ဥပဒေ၊
ပုံနှိပ် ဥပဒေ၊ မတရား အသင်း ပုဒ်မ ၁၇ (၁)၊ ပုဒ်မ ၁၃ (၁) နှင့် ပုဒ်မ အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၂၈ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါသည်။
3/20/2012 05:39:00 PM
ရွှေကုမ္ပဏီတွေကြောင့် လယ်ဧက ရာပေါင်းများစွာ ပျက်စီး
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် အတွင်းမှာ ရွှေ တူးဖော်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကြောင့် ဒေသခံ လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ လယ်သမားတွေ က
ဝေဖလာအင်း အနီး မှာ ရွှေကျင်နေတာ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ်၊ နွေစပါး စိုက်ထားတဲ့ လယ်ဧက အနည်းဆုံး ၃၀၀ ၀န်းကျင် ပျက်စီးနေတယ် လို့ လယ်သမားတွေက ဆိုပါတယ်။
လယ်မြေ ၇ ဧက လုံး ပျက်စီးသွားတဲ့ လယ်သမား မိသားစုက မနန်းခိုင်က ပြောပြ ပါတယ်။
“နွံရေတွေနဲ့ လယ်တွေ အကုန်လုံး နစ်မြုပ် ကုန်ပါပြီ။ နောင်တော ကျေးရွာ အုပ်စု ဝေဖလာအင်း ကို အမှီပြုပြီး အင်းပတ် ပတ်လည် ရေတိမ် တဲ့ နေရာတွေ မှာ တောင်တွေ အများကြီး
ရှိပါတယ်။ ရေနောက်ပြီး ပျက်စီးနေပါတယ်။ စပါးတွေလည်း ပျက်ဆီးတယ်။ စိုက်ပြီးလို့ အခုနေချိန်ဆို စပါးနှံတောင် ထွက်ခါနီး နေပြီ။ အခြေမျှော မြစ်ရေကြောင့် စပါးနှံတွေ လုံးဝ မထွက်နိုင်တော့ဘူး။”
ဝေဖလာ အင်းတ၀ိုက်က တောင်သူ ၄၀ ကျော်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းတွေ ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်နေတယ်လို့ လယ်သမားတွေ အရေးကို အကူအညီပေး တဲ့ ဒေသခံ
ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
လယ်ကွက်ထဲမှာ ၀င်သွားပြီ ဆိုရင် လယ်ကွက်ထဲမှာ စပါးပင်တွေက ရေနောက်နေရင် ပင်ပွားလည်း မရှိတော့ဘူး။ အနှံလည်း မထွက်တော့ ဘူး။ နွေစပါးတွေပါ အခု စိုက်နေတယ်၊ နွံရေစီးကြောင်း က ရေစီးကြောင်းကြီး လို ဖြစ်သွားပြီး ဧကတွေ တော်တော်များများ နွံရေတွေကြောင့် ပျက်စီးကုန်ပြီ။ စပါးတွေက အောက်ကို မြုပ်နေတယ်။ အဲဒီ့ နေရာမှာ ဦးထန်သောင်း၊ ဒေါ်ခင်လှဆိုတဲ့ လယ်သမား မိသားစုရဲ့
လယ်က ၁၂ ဧကလောက် ရှိတယ်။ သူတို့လယ်တွေဆိုရင် အားလုံး နီးပါး ပျက်စီးကုန်တယ်။”
ဒီဒေသက လယ်သမား မိသားစုတွေဟာ လယ်လုပ်ငန်းကလွဲလို့ တခြားလုပ်စရာ မရှိကြပါဘူး။ ရွှေကုမ္ပဏီတွေဟာ မနှစ် မတ်လက စလို့ အဲဒီ့ ဒေသကို ၀င်ရောက်လာ တာ ဖြစ်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီတွေ များစွာထဲက ရွှေဝတီ၊ ရွှေတောင်ကြား၊ ငုဝါ ၀င်းရွှေ၊ ဌေးဝင်းထွန်း၊ အင်းတိုင်းစံ၊ စွမ်းထက်ဝင်း စတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ကိုတော့ ဒေသခံတွေက သိကြပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကို ထိခိုက်လာတဲ့အတွက် ဒေသခံ ရှမ်းနီ လူမျိုးတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကြားမှာ အခြေအနေ တင်းမာနေတယ် လို့ ဒေသခံ ကျောင်း ဆရာမ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်တော့မယ့် အနေအထားရှိလာပြီ။ ကျမက တောင်သူတွေဘက်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျမတို့ အနုနည်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်း ရအောင်၊ တရား ဥပဒေနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းရအောင်လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျမ မှိုင်းတိုင်း ရဲစခန်းကို သွားပြီးတော့ အကူအညီ တောင်းပါတယ်။ မှိုင်းတိုင်း ရဲစခန်းကလည်း မော်စိန် ရဲကင်းမှူးကို ရုံးစာနဲ့ ထွက်ပြီး အကူအညီတောင်းတော့ အခုချိန်ထိ အဲဒီနေရာမှာ နေ့ည လှည့်ကင်းလေးတွေ ချထားပေးပြီးမှ ကျမ ရန်ကုန်ကို ဆင်းခဲ့ပါတယ်။”
ရန်ကုန်မှာ လယ်သမားအရေး အကူအညီပေးနေတဲ့ ရှေ့နေဦးဖိုးဖြူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ
ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
သူတို့ဟာ အစိုးရနဲ့ အကျိုးတူ လုပ်ကိုင်တယ်လို့ ဆိုပြီး၊ လယ်ယာမြေတွေထဲကို မကျူးကျော်ဖို့ မြို့နယ် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ညွန်ကြားချက်တွေ ကိုတောင် လိုက်နာခြင်း မရှိဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
စစ်တွေမြို့မှ ထွက်ခွာလာသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုး(၈၂) ဦးတင်ဆောင်လာသည့် စက်လှေအားထိန်းသိမ်း
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ငပုတောမြို့နယ် ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးကုန်းကျေးရွာတွင် မတ်လ(၁၅)ရက် နေ့လည် ၂နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်ခန့်က ဘင်္ဂါလီလူမျိုး(၈၂)ဦးကို တင်ဆောင်လာသည့်ရေယာဉ်တစ်စီး အင်ဂျင်စက်ချို့ယွင်းမှုကြောင့်အရေးပေါ် ဆိုက်ကပ်ခဲ့ ရကြောင်း သိရသည်။ရေယာဉ်မှာ အလျား(၄၂)ပေ၊ အနံ(၉)ပေ၊စောက်(၄)ပေခွဲရှိ တန်ကေးအမျိုးအစား တရုတ်နီ(၂၂)ကောင်တပ်ရေယာဉ်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ ကျား(၈၁)ဦး မ(၁)ဦး စုစုပေါင်း (၈၂)ဦးကို မတ်လ(၁၀)ရက်နေ့ ည-၁၂ နာရီခန့်က ပေါက်တောမြို့နယ် ပါရီပါရာ ရွာမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒလဆိပ်ကမ်းသို့ထွက်ခွာလာရာ ဝါးကုန်း ကျေးရွာအနီးအရောက်တွင် အင်ဂျင်စက်ချို့ယွင်းပြီး စက်လှေဝမ်းဗိုက်မှ ရေစိမ့်ဝင်ခြင်း တို့ကြောင့် ကမ်းခြေသို့ ဆိုက်ကပ်ခဲ့ရ ကြောင်းသိရသည်။ စက်လှေ ပေါ်တွင်ပါလာသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး(၈၂)ဦးကို ဟိုင်းကြီးကျွန်း မြို့နယ်ခွဲရှိ တာဝန်ရှိသူများက ဝါးကုန်းကျေးရွာ အုပ်စု စီလောင်ကျေးရွာရှိ မူလတန်းလွန် ကျောင်းတွင် ထိမ်းသိမ်းထား ရှိပြီး စစ်ဆေးခဲ့ရာ တစ်ဦးလျှင် ကျပ်ငွေ (၁၅၀၀၀၀) နှုန်းဖြင့် ပေါက်တောမြို့နယ်၊ တောင်ရွာပါ ရွာနေ မာတန်မှ(၁၆)ဦး၊ ပါရီပါရာရွာနေ မမော်ဒမ်မှ(၈)ဦး၊ပါရီပါရာရွာနေ မမော်ဒမ်မှ (၈)ဦး၊ ပါရီပါရာရွာနေ မမော်ဒမ်မှ (၈)ဦး၊ ပါရီပါရာရွာ နေ ဒူမာဟာကင်းမှ (၁၁)ဦး ၊ ပေါက်တောမြို့နေ ဟာဘီဒူလာ မှ(၄)ဦး ၊ ပေါက်တောမြို့နယ် အန်နာတိုမ်ရွာနေ အဒူရှစ်ရ်မှ(၁)ဦး ၊ ပါရီပါရာရွာနေ ဟာလီအူစခန်းမှ (၁၆) ဦး ၊ ခုံတန်းရွာနေ ဆာရာမူကူနာမှ (၃)ဦး ၊ ပေါက်တောသောင် ရွာနေ မူဆိုလီမှ(၂) ဦးကို အသီးသီးကို ခေါ်ယူလာ ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရွှေလှံဗိုလ်ကောလင်းမြို့စား ရွှေမြို့တော်ဝန် မင်းကြီးမဟာ မင်းခေါင်နော်ရထာ ဦးချက် ၏ ဂူပြဿဒ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိ
မင်းတုန်းမင်း တရားကြီးလက်ထက် ကရှိခဲ့သည့် မြို့တော်ဝန်လေးဦးအနက်မှ ရွှေလှံဗိုလ် ကောလင်းမြို့စားရွှေမြို့တော်ဝန် မင်းကြီး မဟာမင်းခေါင်နော်ရထာ ဦးချက် ၏ဂူပြဿဒ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဂူပြဿဒ် သည် မင်းတုန်းမင်း တရားကြီး လက်ထက်က ရှိခဲ့ပြီးတိမ်မြှပ်ပျောက် ကွယ်နေရာမှမန္တလေးမြို့ခံပြည်သူများက ပြန်လည်ရှာဖွေ တွေ့ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေလှံဗိုလ်ကောလင်းမြို့စားရွှေမြို့တော်ဝန် မင်းကြီး မဟာမင်းခေါင်နော်ရထာ ဦးချက်၏ဂူပြဿဒ်အား စတင်တွေ့ရှိပုံ''
အဲဒီဂူပြဿဒ်ရဲ့ ဘေးပတ်လည်မှာ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ ရဲ့ဂူလေးလုံးရှိခဲ့တယ် ။ အခုတွေ့တာကတော့ နောက်ဆုံး ဂူတစ်လုံးပါပဲ။ တော်တော်လေးလည်း ယိုယွင်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ ကျော်လောက်က မြို့တော်ဝန်ရဲ့ ဆွေတော် မျိုးတော်တွေ နောက်ဆုံး လာရောက်ပြုပြင် သွားခဲ့ကြတယ်လို့ အိမ်နီးနားချင်းတစ်ဦး ကပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တဲ့ နေ့က ရှေးဟောင်း သုတေသနဌာန ကလည်း လာကြည့်သွားတယ် လို့ပြောတယ်။ အခု လောလော ဆယ်တော့ ရပ်ကွက်ကပဲစုပြီး အဲဒီနေရာတဝိုက်ကို ခြံခတ်ထား တယ် ''ဟု မန္တလေး ဒေသခံတစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုသူရိန် က ပြောသည်။
ရွှေလှံဗိုလ်ကောလင်းမြို့စားရွှေမြို့တော်ဝန် မင်းကြီး မဟာမင်းခေါင်နော်ရထာ ဦးချက်၏ဂူပြဿဒ်
ယင်းဂူပြဿဒ်သည် ၈၆*၈ရလမ်း၊ ၁၇*၁၈ လမ်းကြား အကွက်အမှတ်၁၃၅၊ အောင်မြေသာဇံရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ရွှေလှံဘုန်းကြီး ကျောင်းနားတွင် တည်ရှိကြောင်းသိရသည်။ '
ရွှေလှံဗိုလ်ကောလင်းမြို့စားရွှေမြို့တော်ဝန် မင်းကြီး မဟာမင်းခေါင်နော်ရထာ ဦးချက်၏ဂူပြဿဒ်ရွှေလှံဘုန်းကြီး ကျောင်းအနောက် မြောက်ထောင့် မှာ ရှိတဲ့ အကွက်နေရာဖြစ် ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ လူနေအိမ်တွေထူ ထပ်လာတော့ အဲဒီနေရာက တဖြည်းဖြည်း နဲ့လျော့နည်း လာလိုက်တာအခုဆိုရင်ပေ ၂ဝ ပတ်လည်နီးပါး လောက်ပဲ ရှိတော့ တယ်။ အရင်ကတည်း ကသူရဲ့ ဘေးပတ်လည်မှာ လူနေအိမ်တွေရှိတယ်လို့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးကပြောတယ်။ နောက်ပြီးသူ့ရဲ့အရှေ့ မှာလမ်းကြားလေးရှိတယ်''ဟု ကိုသူရိန် က ဆက်လက်ပြောပြခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်စခန်း အစိုးရတပ် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော်တောင်ပိုင်း အဖွဲ့နဲ့ အစိုးရတပ်တွေ အကြား တိုက်ပွဲတွေ ထပ် ဖြစ်နေပြီး ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်စခန်း တခုကို အစိုးရတပ်ဘက်က သိမ်းပိုက် လိုက်တယ်လို့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိ တဦးက ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စ၀်ကွမ်းစင့်(Photo - Shan Herald Agency for News)
ရှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းယောင်းမြို့နယ် မိုင်းလိုင် တိုက်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ ရှမ်းပြည် တပ်မတော်ရဲ့ တပ်စခန်း တခု ကို အစိုးရ တပ်ရင်း တခုက ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်က ၀င်တိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။
ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှမ်းပြည် တပ်မတော် ကျိုင်းတုံစစ်ဒေသမှူး ဒု – ဗိုလ်မှူးကြီး စ၀်ကွမ်းစင့်က “မတ် ၁၈ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီကျော်လောက်မှာ အစိုးရတပ် ခမရ ၅၇၃ က
အုပ်စု ၃ဖွဲ့ ခွဲပြီး လွယ်လန်း ဖာ့ဟင်ချို ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ကျနော်တို့ စခန်းကို ၀င်တိုက်တယ်။ မိနစ် ၄၀ လောက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး အင်အား မမျှတော့ ကျနော်တို့ ဆုတ်ခွာတာနဲ့ သူတို့ ၀င်သိမ်း လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။” လို့ပြောပါတယ်။
မတ် ၁၁ ရက်နေ့ မနက်ကလည်း အစိုးရတပ် ခမရ ၅၇၃ ဟာ ကျိုင်းတုံခရိုင် မိုင်း ယောင်းမြို့နယ်ထဲမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်ရင်း ၁၀၈ အဖွဲ့ တို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒု – ဗိုလ်မှူးကြီး စ၀်ကွမ်းစင့်ကတော့ အစိုးရတပ်ရင်းဘက်က ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ကို ထိုင်း နယ်စပ်ဘက် ဆုတ်ခွာဖို့နဲ့ နယ်မြေကျဉ်းလာအောင် ဖိအားပေးရင်း ထိုးစစ် ဆင်နေတာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် ဘက်ကတော့ ခုခံစစ်နဲ့ ပြန်တိုက်နေရတာ လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီနဲ့ မတ်လ ထဲမှာ ကျိုင်းတုံနဲ့ တာချီလိတ် ခရိုင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ရဲ့ တပ်စခန်း ၅ ခုလောက် ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ် လို့ သိရပါတယ်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးထားပြီး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် ဘက်က ဖြေရှင်းပေးဖို့ ငြ်ိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်မင်းဆီ စာရေးပို့ခဲပြီး အဲဒီ့ စာအရ ငြိမ်းချမ်းရေး
ကိုယ်စားလှယ် နဲ့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်းဘက်က ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် နေ့တုန်းက ထိုင်းနယ်စပ် တနေရာမှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသေးတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်ဘက်က တိုက်ပွဲ မဖြစ်ပွားရေး တာဝန်ယူပေးမယ် လို့ ပြောသွားပေမယ့်လည်း တိုက်ပွဲတွေ နောက်ထပ် ဖြစ်ပွားနေဆဲပဲ လို့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်က ပြောပါတယ်။ ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အပါအ၀င် မည်သူမဆို အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပါက ထောင်ဒဏ် တစ်သက် တစ်ကျွန်းအထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သောပစ္စည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
အများနှင့် သက်ဆိုင်သောပစ္စည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၃) တွင်
မည်သူမဆို အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခိုးမှု၊ အလွဲသုံး စားပြုမှု၊ သို့တည်းမဟုတ် လိမ်လည်မှုတို့ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် တစ်သက်တစ်ကျွန်းဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ၁၀ နှစ်ထက် မနည်းသည့် ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ထို့ပြင် ငွေဒဏ်ကိုလည်း ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ မည်သူမဆိုဟူသော စာသားဖြင့် ပြဋ္ဌာန်း ထားသောကြောင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အနေဖြင့်လည်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို
အလွဲသုံးစားပြုပါက အခြားသူများနည်းတူ ပြစ်ဒဏ်ကျခံ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေပညာရှင်များက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေ အမှတ် (၁) ဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ် ပြီး ယင်းဥပဒေသည် ၁၉၄၇
ခုနှစ် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေနှင့် အလား တူသော်လည်း သီးခြားဥပဒေဖြစ် ကြောင်း အထက်တန်းရှေ့နေတစ် ဦးကဆိုပါသည်။
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေနှင့် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ တို့၏ ခြားနားချက်များမှာ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေက ခိုးမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာ
ကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အက်ဥပဒေက တရားမ၀င်ဘဲ လက်ဝယ်ထားရှိမှု၊ ခိုးမှု ၊ အလွဲသုံးစားမှု သို့မဟုတ် အကျိုးဖျက်ဆီးမှုကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရသိရသည်။
သစ်ထူးလွင် ၀က်ဆိုဒ်အား ပြည်တွင်းမှ ကြည့်ရှုနိုင်မည့် Comments များရဲ့ ပြောပြချက်များ
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တချို့ အင်တာနက်လိုင်းများမှ www.thithtoolwin.com ဖွင့်ရင် အခုလိုတွေ့ ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တချို့ အင်တာနက်လိုင်းများမှ http://www.thithtoolwin.com/ ကို ကြည့်
ရှုလို့ မရသူများအတွက် Comments များရဲ့ ပြောပြချက်များကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ
ပိတ်ထားတယ် ဆိုတော့ ကျော်ကြည့််လိုရရင် ကျော်ကြည့် လို့ရအောင်ပါ...
http://vtunnel.com ဒီ proxy ကနေ ကျော်ကြည့် ကြည့်ကြပါ.
www.polysolve.com လို့ အရင် ရိုတ်ထည့်လိုက်ပါ ပြီးရင် ကျလာတဲ့ box လေးမှာ www.thithtoolwin.com လို့ ရိုတ်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ရင် ကြည့်လို့ ရပါပြီ ခင်ဗျာ ....
adsl နဲ့ ဆိုရင် တော့ ဒီအတိုင်းကြည့်လို့ ရပါတယ်....
မြန်မာပြည်သူများ ကြည့်ရှုရလွယ်ကူရန် ဖြတ်လမ်းများ https://www.ctunnel.com
said... စကိုင်း နက် နဲ့ ဆိုရင် အကို့် ဆိုဒ် ကို ၀င် ဖတ် လို့ မ ရ ပါ ဘူး...
MPT နဲ့ ဆို အ ခု ၀င် ဖတ် လို့ ရ နေ တယ်
MPT ADSL user ပါ ခုထိဝင်ကြည့်လို.ရနေသေးတယ်
March 20, 2012 10:25 AM ju black
can't open with ADSL and red link,but can open GSM phone.If can't open how we read.please let we know.
Chan Nyein အဲ့ဒီ့ Redlink နဲ့ Yatanarpon teleport စောက်ပိုတွေလုပ်လွန်းတယ်၊ ပိုက်ဆံအများကြီးပေးပြီးသုံးနေတဲ့ ပြည်သူကိုစော်ကားနေသလိုဘဲ သူတို့လုပ်ရပ်က၊ အခုဆို denied လုပ်တာ Redlink နဲ့ Yatanarpon teleport ကအများဆုံးဘဲ၊ yuyajune: hello.ko thit htoo lwin..today we cann't open your website.let me know correct answer its colse or not?and then if we want to see this webpage kindly send to us which step can we use.thanks u.Myanmar News Now သစ်ထူးလွင်
အလင်းတန်း ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၆၉၈
3/20/2012 03:27:00 PM
မီးကြွင်း မီးကျန်မှ တဆင့် မိတ်္ထီလာ မြို့၌ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့
ဒေသကြီး၊ မိတ်္ထီလာမြို့ရှိ ရတနာမာန်အောင် ရပ်ကွက်မှာ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက်
၁ နာရီက မီးလောင်ကျွမ်းမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ
မီးလောင်မှုဟာ နေအိမ်မှာ ရှိတဲ့ မီးဖို မီးကြွင်း မီးကျန်က တဆင့် လောင်ကျွမ်း ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ မီးသတ် ဦးစီးဌာနက သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အိမ်ဟာ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း ၂ ထပ်အိမ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင် ကျွမ်းမှုကို မီးသတ် ဦးစီး ဌာနက နံနက် ၁ နာရီ ၅ မိနစ် အချိန်မှာ သတင်းရရှိ တဲ့အတွက် မီးသတ်ယာဉ် ၆ စီး၊ စည်ပင် ရေသယ်ယာဉ် ၁ စီး၊ သန္ဓေ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ဦး၊ အရန် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇၅ ဦးတို့နဲ့ သွားရောက် မီးငြှိမ်းသတ် ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီ အတွက် နံနက် ၁ နာရီ၊ မိနစ်၂၀ မှာ မီးထိန်း နိုင်ခဲ့ပြီး ၁ နာရီ၊ မိနစ် ၃၀ မှာတော့ မီးငြိမ်း သွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ မီးလောင်ကျွမ်း မှုကြောင့်
လူနေအိမ် ၆ လုံး မီးလောင် ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဆုံးရုံးမှု ကတော့ တန်ဖိုးငွေ ကျပ် ကိုးသိန်း နီးပါး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မီးလောင် ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ နေအိမ် တွေက မီးဘေးသင့် မိသားစုဝင် တွေကိုတော့ ရတနာမာန်အောင် ဘုရားဝင်း အတွင်းမှာ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ဖွင့်လှစ်ထား ရှိတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
မြေလွတ်မြေရိုင်း ဥပဒေနဲ့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ တွေကို မနေ့က တနလာင်္နေ့မှာ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် က အတည်ပြုလိုက် တာပါ။ဒီ ဥပဒေတွေက လယ်ယာမြေ အဓမ္မ သိမ်းဆည်း ခံနေရမှု တွေကိုတော့ အနည်း ငယ် အကာအကွယ် ပေးနိုင်မယ့် သဘောရှိပေမဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့် နဲ့ မြေလွတ် မြေရိုင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုတော့ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးတော့ လွှတ်တော် အမတ် တချို့က သုံးသပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို သုံးသပ်ကြတာပါလဲ။ ဆက်သွယ် မေးမြန်းထား တဲ့ မသိဂီ င်္ထိုက်က အပြည့်အစုံ
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ မြေလွတ်မြေရိုင်း ဥပဒေမှာ ဆိုရင်
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ကြီးတွေကို ဧက ငါးသောင်းအထိ ရယူ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးထားပေမဲ့ မိရိုးဖလာ ဒေသခံ လယ်သမားတွေ မြေလွတ် မြေရိုင်း တွေ လုပ်ကိုင် လိုတယ် ဆိုရင်တော့ ဧက (၅၀) ထိဘဲ ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“လယ်ယာမြေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခုနကလို မြေနုကျွန်းတို့၊ တခြား နှစ်ရှည်တို့၊ ယာတို့၊ တောင်ယာတို့၊ စပါးစိုက် တဲ့ လယ်မြေတို့ ဘာညာ ခွဲခြားတဲ့ အခါမှာ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုကိုလည်း ဥပဒေ အရ သတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာ မွေးမြူခွင့် ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုမျိုး လယ်ယာ မြေ မှာ တကယ် တကယ် လယ်လုပ် ကိရိယာဖြစ်တဲ့ ခိုင်းကျွဲနွားတွေ တခြား လယ်လုပ် ကိရိယာ တွေ ကို ထားဖို့၊ သိုဖို့ အတွက် ထားခွင့်ပေ့ါနော်။ ဟိုတုန်းကဆိုရင် Pasture ရှိတယ် ဗျ။ စားကျက်မြေ။ အခု စားကျက် မြေ လည်း ပျောက်ပျက်ကုန်ပါပြီ။ အဲဒါမျိုး ထားခွင့်ကို ကျနော်တို့ က
မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လို့ လယ်ယာ မြေပေါ်မှာ ခုနကလို ဆန်စက်လို ဟာမျိုး စပါးလှောင်တဲ့ ဂိုဒေါင်ကြီးလိုဟာ မျိုး ဒါ တည်ထောင် ဆောက်လုပ် ထားတာ ခွင့်ပြုတဲ့ သဘော မို့လို့ ကျနော် အနေနဲ့ အဲဒါလေး ကိုတော့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။”
တနလာင်္နေ့ မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ မြေလွတ်မြေရိုင်း ဥပဒေကြမ်း၊
လယ်ယာမြေ ဥပဒေကြမ်းနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်းတွေကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဥပဒေတွေကို သမ္မတ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးရင်တော့ ဥပဒေ အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီ ဥပဒေတွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေတော့ အများ ကြီး ရှိနေပါတယ်။ လွှတ်တော် အမတ်တွေကတော့ ဒီဥပဒေတွေကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးလာတဲ့ အခါမှာ ပြည်သူ လူထုရဲ့ ထောက်ပြချက်နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လွှတ်တော်က ဆက်ပြီး ပြင်ဆင်သွားရအုံးမယ်လို့ ပြော ပါတယ်။
3/20/2012 02:56:00 PM
The Voice ဂျာနယ်ကို သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာန တရားစွဲပြီ
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက The Voice Weekly ဂျာနယ်ကို အသရေဖျက်မှုပုဒ်မဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ်တရားရုံးတွင် စတင် တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်ရှိတဲ့ အရာရှိတွေနဲ့ ဥပဒေအကြံပေးတွေ လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က တရားရုံးကို ရောက်လာပြီး The Voice ဂျာနယ်ကို အသရေဖျက်မှုနဲ့ အရေးယူပေးဖို့ ဦးတိုက်လျှောက်တယ်။ ဂျာနယ်ထဲမှာ ရေးထားတဲ့သတင်းကြောင့် ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းလို့ အသရေဖျက်မှုပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲတယ်” ဟု ဒဂုံမြို့နယ်တရားရုံးမှ ဥပဒေ၀န်ထမ်းတဦးက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ တရားရုံး ဦးတည်လျှောက်ထားမှုကြောင့် The Voice Weekly ဂျာနယ်၏ ထုတ်ဝေသူ၊ ဂျာနယ်တာဝန်ခံနှင့် သတင်းရေးသားသူ သတင်းထောက်တို့ကို တရားရုံးက ဆင့်ခေါ်ထားပြီး မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အမှုစတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ပြည်တွင်း သတင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းကမူ မော်ဒန်နှင့် The Voice Weekly အပေါ် တရားစွဲဆိုမှုသည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သည့် လုပ်ရပ်အဖြစ် ဝေဖန်နေကြပြီး အဆိုပါ ဂျာနယ်များဘက်မှ တညီတညွတ်တည်း ရပ်တည်ကြမည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း အဆိုပါ ဂျာနယ်များ တရားစွဲဆိုခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းဂျာနယ်များကို တရားစွဲဆိုခြင်းသည် မီဒီယာကို ကန့်သတ်သည့် လုပ်ရပ်၊ နိုင်ငံတိုးတက်ရေးကို ကန့်သတ်သော လုပ်ရပ်အဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။
မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Weekly တွင် “၀န်ကြီးဌာနအချို့၏ ကျပ်သိန်းထောင်ချီ အလွဲသုံးစားမှုများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ” ဆိုသော သတင်း၌ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း၏ မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်း အစုရှယ်ယာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအား ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်သို့ ရောင်းချခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ဦးပိုင်လီမိတက်က ငွေ ပေးချေရမည့်အစား နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတခုက ပေးချေခဲ့ကြောင်း စသည်ဖြင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ အလွဲသုံးစားမှုအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ကိုးကားပြီး ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့သည်။
ယင်းသတင်းဖော်ပြပြီးနောက် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက The Voice Weekly တွင် ဖော်ပြသော သတင်းများသည် မှားယွင်းနေပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟု အစိုးရပိုင် သတင်းစာများမှတဆင့် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်။
3/20/2012 02:28:00 PM
သင်္ကြန်ရက်မှာ ရုံးမပိတ်တဲ့ သံမဏီစက်ရုံဝန်ထမ်းများ၏ တိုင်ကြားစာ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ် ကျောက်စွယ်ကျိူးကျေးရွာရှိ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံတွင် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များအပါအ၀င် သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်များကို အလုပ်မပိတ်ခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ်အပါအ၀င် (၄)နှစ်ရှိပါပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ထိုစက်ရုံမှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှ မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်
အခုကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများ မခံရပ်နိုင်တော့လို့ တိုင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ ရဟန်းခံမည့်သူများ၊ ရပ်ဝေး၀န်တမ်းများ မိဘရပ်ထံပြန်မည့်သူများ၊ အနားယူအပန်းဖြေလိုသူများ များစွာရှိနေပါတယ်။
သင်္ကြန်ရက်များအတွင်း စက်ရုံမှာလည်ပတ်မည်မဟုတ်ပါ...စက်ရုံလုံခြုံရေးအတွက် အလုပ်ဆင်းပေးရမှာတဲ့...လုံခြုံရေးအတွက် ၀န်ထမ်းအားလုံးမလိုအပ်ပါ..လုံခြုံရေး
၀န်ထမ်းသီးသန့်များလည်း ခန့်ထားပြီးသားရှိပါတယ်..မတရားသက်သက် အနိုင်ကျင့်စေ
ဧရာဝတီတိုင်း၊မြောင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းရေကျော်ကျေးရွှုာ ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ကျေးရွာအုပ်စု ရုံးတွင် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ညက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
မန်းဂျော်နီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါသော ပိုစတာများ ဓါးဖြင့် ခုတ်ဖြတ် ဖျက်ဆီးခံရပါသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ နောက်တစ်နေ့ နေ့လည်တွင် မန်းဂျော်နီ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးပြီး မြောင်းမြမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများဖြစ်သော ဦးမောင်ဖုန်း၊ ဦးမောင်ပြုံး၊ ဦးဇော်ဇော်၊ ဦးဂျော့ တို့လည်း အတူလိုက်ပါသွားကြ၍ အဖြစ်အပျက် အသေးစိတ်အား ဆက်လက်စုံစမ်းနေကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့နှင့်
ဥပဒေ အကြံပေးအဖွဲ့ တို့မှ အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ခေါ်ယူပြီး သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရပါသည်။ “ဒါပြည်သူတွေကို ကြောက်လန့်အောင်လုပ်တာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကပြည်သူတွေကိုတော့ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ဆက်လက်အောင်ပွဲဝင်နိုင်အောင် ဆက်ပြီး ကြိုးစားပေးကြပါ၊ ဘာတုန့်ပြန်မှုမှ မလုပ်ပါနဲ့” လို့ မန်းဂျော်နီ မှ ရွာသားများကို ပြောကြားသွားကြောင်း သိရသည်။ ဆက်လက်ပြီး “ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်သွားမယ်၊ လောလော ဆယ် တိုင်ချက်ဖွင့်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခဏခဏ ပြောနေတဲ့ တရားဥဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသေးဘူးဆိုတာ ပြတာပဲ။ ဒါကြာင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိတယ်ဆိုတာ ပြချင်ယင် ဒီကိစ္စကို ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးဖို့ လိုပါတယ် “ လို့ မန်ဂျော်နီက ပြောကြားကြောင်း NLD မှ လာသော နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာ များ အရ သိရပါသည်။
National League for Democracy (Facebook)
3/20/2012 10:11:00 AM
ပြင်ဦးလွင် တရုတ်ဘုံကျောင်းမှာ ဦးအောင်သောင်း မဲဆွယ်စည်းရုံး (ရုပ်/သံ)
မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ တရုတ်ယူနန်ဘုံကျောင်းမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအတွက် ဦးအောင်သောင်းက မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပြုလုပ်သွားပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုကျူးလစ်က တင်ဆက်ပါတယ်။
3/20/2012 09:55:00 AM
http://burmese.nldburma.org NLD ၀က်ဆိုဒ် ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ ရပါပြီ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် http://burmese.nldburma.org ၀က်ဆိုဒ် အင်တာနက်စာမျက်နှာ ယခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
http://burmese.nldburma.org ၀က်ဆိုဒ်အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ယခုတွေ့ ရစဉ်
ပြီးခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ တွေ့ ရပုံ
မကွေးမြို့ နယ်မှာ NLD အောင်နိုင်ရေးစည်းရုံးစည်းရုံးဟောပြော ခွင့်များကိုပိတ်ပင် (ရုပ်/သံ)
မကွေးတိုင်း မကွေးမြို့နယ် ကျေးရွာများတွင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ NLD အောင်နိုင်ရေး
စည်းရုံးရေးဟောပြောခွင့်များကို ဖုတ်ကုန်း(စည်ပင်သာ) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရွှေလုံးနှင့် မကွေးမြို့ နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလှရှောင်မှ တားဆီးပိတ်ပင်နေကြောင်း
သိရပါတယ်။ မကွေးမြို့နယ် ဖုတ်ကုန်း(စည်ပင်သာ)ကျေးရွာ ကို မကွေးမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မတိုင်မီ မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့ ညမှာတစ်ကြိမ်၊(၁၈)ရက်နေ့ နံနက်တစ်ကြိမ် အသံချဲ့စက်နဲ့ကျေးရွာသူ/သားများကို အသံချဲ့စက်များနှင့် လူစုလူဝေးများဖြင့် NLD အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့များအား ကြိုဆိုကြခြင်းမပြုလုပ်ပါရန် မကွေးမြို့ မ.ယ.က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလှရှောင် အမိန့် ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ဒေသခံတဦးက
ပြောပြထားပါတယ်။ ဒေသခံရဲ့ ပြောပြချက် ရုပ်/သံ ဖိုင်ကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သတင်း-ရုပ်/သံ Nyi Moon
3/20/2012 08:15:00 AM
ယနေ့ နံနက် ၁၁း၃၀ တွင် ဇရပ်ကွက် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၆၈လမ်းနှင့်၆၉လမ်းကြား သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း
နိင်စိုးပိုင် သံရေကြိုလုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်ဦး ကျော်...၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် တာဝေးပစ်ဗုံးအမျိုးစားဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကလေး၃ဦး ဖြစ်သော စိုးမိုးသူ (ဘ) ဦးအောင်ငွေ ၁၆နှစ် နံသာလှိုင်ရွာ ၊ မြင်းခြံမြို့နယ်မှဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဦးမှာ ကိုမိုး (ဘ) ဦးမင်းစိုး ၁၉နှစ် နှင့် ချစ်ကောင်း (ဘ) ဦးတင်သွင် မိုးထောင်ရွာ ငါးဇွန်မြို့နယ်တို့ ၃ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။စိုးမိုးသူ နှင့် ကိုမိုးတို့မှာ နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ချစ်ကောင်းမှာတော့ ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ပြီး ညနေ၃နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါ တာဝေးပစ်ဗုံးအမျိုးစားကို သံတူနှင့်ထုရာမှပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုမိုးမှာ ဘယ်ခြေပြတ် ၊လက်နှစ်ဘက်ပျက် နှင့် ဗိုက်ပွင့်ဒဏ်ရာဖြင့် နေရာတွင်သေဆုံးခဲ့ပြီးအလားတူ စိုးမင်းသူမှာလည်း ခြေ၂ဖက်ပျက် ဗိုက်ပွင့်ဒဏ်ရာနှင့်သေဆုံးသွားခဲ့ကြပါသည်။ချစ်ကောင်းမှာ ခြေ ၊ ဦးခေါင်းတို့တွက် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံတွင်သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။သေဆုံးသူများ၏အခင်းဖြစ်ရာအနီးတစ်ဝှိက်တွင် ခြောက်ပေါင်တူ ၁လက် နှင့်သံထည်ဟောင်း ရှော့ဘားများကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ဆက်လက်၍တာဝန်ရှိသူများအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ရောက်ရှိစစ်ဆေးရှာဖွေရာမှမပေါက်သေးသောဗုံး
သူတို့၃ဦးမှာ အဟောင်းထည်များဖျက်ရန်အတွက် သံထည်များထုနှက်နေချိန်ပေါက်ကွဲသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှမျက်မြင်များ၏ပြောကြားချက်ကိုသိရှိခဲ့ရပါသည်။
(သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံ ကျော်ဇေ၀င်း) သစ်ထူးလွင်
3/20/2012 06:25:00 AM
တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပမည့်ရက် ကြေညာခြင်း
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (Citizen of Burma Award)
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပမည့်ရက် ကြေညာခြင်း
နေ့စွဲ - ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်
မြန်မာပြည်တွင်း၌ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူမှုလုပ်ငန်းများကို
ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေသူများအား ၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များအတွက်
ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူပါကြောင်း ဂုဏ်ပြုမည့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (Citizen of
Burma Award) ဆု တတိယအကြိမ် ရွေးချယ်ပေးအပ်ဂုဏ်ပြုပွဲကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့၌
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပမှ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို မြန်မာပြည်အတွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို
ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံကာ အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်နေကြသူများထဲမှ မိမိလေးစားဂုဏ်ပြုလိုသော
လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းတို့ကို အမည်စာရင်းများ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းကို
စတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ မည်သူမဆို ဆန္ဒပြုနိုင်ပါသည်။
ဆန်ခါတင် ၅ ဦးကို မြို့အသီးသီးရှိ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့ဝင်များက ဧပြီလအတွင်း
ဆန်ခါတင် ၅ ဦး (သို့မဟုတ်) ၅ ဖွဲ့၏ အမည်စာရင်းကို မေလဆန်းတွင် ထုတ်ပြန်၍
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှတဆင့် အများပြည်သူ၏ ဆန္ဒမဲ ကောက်ခံကာ
ဆန္ဒမဲအများဆုံး ရရှိသူကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပရေး
အောက်ပါအဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။
၁။ ကိုအေးမြင့် (အရီဇိုးနား)
၂။ ကိုထိန်လင်း (ဆန်ဖရန်စစ္စကို)
၃။ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ (လော့စ်အိန်ဂျလိစ်)
၄။ ဦးကိုလေး (လော့စ်အိန်ဂျလိစ်)
၆။ မသိင်္ဂီ (နယူးယောက်)
၁၀။ ကိုဝေလ (နယူးယောက်)
ကိုဝင်းသူအောင် (လက်စ်ဗေးဂတ်) ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုအတွက်
အမည်တင်သွင်းခြင်းအပါအ၀င် အဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်သည်များကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်
အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.citizenofburma.org တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များကို ဆက်လက် သတင်းထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ။
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ ကိုဝေလ (၀၁) ၆၄၆ ၄၆၂ ၉၀၁၇
ကိုဝင်းသူအောင် (၀၁) ၇၀၂ ၃၀၈ ၀၆၆၇
(၀၁) ၆၂၆ ၄၇၈ ၇၇၁၇
ကိုထိန်လင်း (၀၁) ၄၁၅ ၅၃၁ ၃၇၆၁
ကိုတင်မောင်အေး (၀၁) ၆၃၁ ၂၅၂ ၈၇၇၆
COBA Nomination Form သစ်ထူးလွင်
3/20/2012 06:18:00 AM
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက တရုတ်ပြည် ကူမင်း လေဆိပ် တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်အား တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခြင်း မပြုမှီ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေး၍မရဘဲ တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ် ပြီးမှသာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက သတင်းမီဒီယာ၏ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှုများကို
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ သမ္မတ ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ကရင် အဖွဲ့အစည်းများ တွေ
့ ဆုံပွဲတွင် KNU နှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်
ကရင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ ကရင်အရပ်ဘက်
3/20/2012 05:54:00 AM
စစ်ကျန်ဗုံးဟောင်း ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၃ ဦးသေ
မန္တလေး မတ် ၁၉
ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ် ၆၈ လမ်းနှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊ သခင်ဖိုးလကြီးလမ်းနှင့် ယောမင်းကြီး လမ်းထောင့် စက်မှုဇုန် (၁) (ဇ) ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နိုင်စိုးပိုင် သံရည်ကျိုစက်ရုံတွင် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ပေါက်ကွဲမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပွားကာ လူသုံးဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ပြည်ကြီးတံခွန် ရဲစခန်းထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သံရည်ကျိုလုပ်ငန်း ရပ်နားထားစဉ် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် သံရည်ကျိုရန် အတွက် စစ်ကျန် ဗုံးသီးဟောင်းများထဲမှ တစ်လုံးကို ထုရိုက်ကြရာမှ ဗုံးကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စက်ရုံလုပ်သား ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
အခင်းဖြစ်နေရာတွင် အမြောက် ကျည်ဆန်ဟောင်း ၈ ခု တွေ့ရှိရပြီး အဆိုပါ ၈ ခုတွင် ယမ်းပါသည့် ကျည်ဆန်ဟောင်း ၂ ခုနှင့် ယမ်းမပါ (၆) ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် ဒလက်မပါသည့် စစ်ကျန် ဗုံးသီးဟောင်း ၁၀ လုံး၊ ဒလက်ပါ ဗုံးသီးဟောင်း ၇ လုံး တွေ့ရှိရကြောင်း အစီရင်ခံစာများအရ သိရသည်။ ၎င်းအပြင် သံရည်ကျိုရာတွင် အသုံးပြုသည့် သံထည်ဟောင်း ပစ္စည်းများ ထည့်ထားသော ပီနံအိတ် ၁၀ အိတ် အတွင်းမှ
စစ်လေယာဉ်ပေါ်မှ ပစ်ချနိုင်သည့် ဗုံးသီးဟောင်း ထိပ်ဖူး ၁ ခုကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်ဟု အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဝန်းကျင်လောက်က ပေါက်ကွဲသံတစ်ခု ကြားလိုက်တယ်၊ ကားသမားစကားနဲ့ ပြောရင် ကားဘီးနှစ်ဘီး ပေါက်တဲ့အသံနဲ့ တူတယ်၊ မြေကြီးတုန်ခါမှု ကိုလည်း ခံစားရတယ်၊ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဖုန်တွေထနေတာ မြင်ရတယ်၊ အဲဒါနဲ့ သွားကြည့်တော့ ဒဏ်ရာရနေသူ တစ်ဦးက ကယ်ပါ ကယ်ပါ လို့ ပြောတာ တွေ့ရတယ်၊ ဒါနဲ့ ကားထွက်တားပြီး
ပွေ့တင် ပေးလိုက်တယ်၊ သူ့အခြေအနေ ကတော့ မေးရင် ပြောနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိသေးတယ်” ဟု အခင်းဖြစ်နေရာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဝင်းအတွင်းရှိ ကားဆရာ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သံရည်ကျိုစက်ရုံလုပ်သား ကိုမိုး အသက် (၁၉) နှစ်၊ ကိုစိုးမင်းသူ အသက် (၁၈) နှစ် တို့ နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးကာ ကိုချစ်ကောင်း အသက် (၁၆) နှစ်မှာ
ဗိုက်ပွင့်ဒဏ်ရာဖြင့် မန္တလေး ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင် ကုသခဲ့သော်လည်း ညနေ
၃ နာရီခန့်တွင် သေဆုံးသွားကြောင်း အခင်းပွားရာမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
သေဆုံးသူများမှာ ငါန်းဇွန် မြို့နယ်နှင့် မြင်းခြံမြို့နယ်မှာ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် ကြသူများ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်ကြီးတံခွန် ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
Photo by MT News
3/20/2012 05:51:00 AM
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင် ကန့်ဘလူမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ် (၃) မဲဆန္ဒနယ် (ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်) မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဦးတင်မောင်ဝင်းက ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းတပင်ကျေးရွာ ဘုရားကွင်းအတွင်းမှာ သူ၏ ပြိုင်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးဖြစ်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ ဒေါက်တာ မြင့်နိုင်ကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ ၁၁း၃၀ အချိန်ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောပွဲမှာ ဦးတင်မောင်ဝင်းက ဒေါက်တာမြင့်နိုင်သည် ထောင်ထွက်တယောက်ဖြစ်သည့်အပြင် မိန်းမ ၂ ယောက် ယူထားတယ် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ပြောဆိုခဲ့ပြီး သူဟာ စစ်ဦးစီးအရာရှိ (ပထမတန်း) ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်က နိုင်ငံအတွက် တကယ် အလုပ်လုပ်နေတာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောပြောခဲ့တယ်လို့ အဆိုပါ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဟောပြောပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဒေသခံတဦးက ပြောပါသည်။
"ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကရော အစိုးရကရော ပြောနေတဲ့ လွတ်လပ်ပြီး မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာက အောက်ခြေမှာ
ဖြစ်ပျက် နေတဲ့ပုံစံက အဲလိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အတိုင်းအတာတခုထိ ကူညီပံ့ပိုးနေတာဟာ လွတ်လပ်ပြီး မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတာ
သံသယဝင်စရာ ဖြစ်နေပြီ" လို့ ထန်းတပင်ကျေးရွာက ဒေသခံတဦးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါသည်။
(ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ်(၃)မဲဆန္ဒနယ် နေရာမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါက်တာ မြင့်နိုင်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ ဦးတင်မောင်ဝင်း နှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီမှ ဦးတိုးမြင့်အောင် တို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
3/20/2012 05:48:00 AM
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ က မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ ဈေးချို ၂ရ လမ်းနှင့် ၈၄ လမ်းထောင့် မန်းမြန်မာပလာဇာအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွါးခဲ့စဉ်က မြင်ကွင်းပါ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်က စက်မှု(၁)ရပ်ကွက် ပုဂ္ဂလိကသံရည်ကျိုစက်ရုံမှာ ဒီကနေ့မနက်က ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် လူ (၂)ဦးသေဆုံးပြီး၊ (၂)ဦး အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေက သံတိုသံစတွေကို ထုနှက်ရင်းကနေ မနက် (၁၀ နာရီ ၄၅မိနစ်) လောက်မှာ ဒီပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်တာလို့ မန္တလေးဒေသခံတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော့််အိမ်နဲ့ မဝေးဘူး။ မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ပေါ့ဗျာ။ စက်မှု(၁)ရပ်ကွက် ပုဂ္ဂလိကသံရည်ကျိုအလုပ်ရုံမှာပေါ့။ အလုပ်သမားလေးတွေ သံရည်ကျိုဖို့အတွက် သံတွေကို သူတို့ သန့်စင်ကြတာဗျ။ သံတွေကို သန့်စင်ရင်းနဲ့ ထုရင်းနှက်ရင်းနဲ့ ပေါက်ကွဲပြီးတော့ အခု အလုပ်သမားလေး(၂)ယောက်ကတော့ သေနေတာတွေ့တယ်ဗျ။ (၂)ယောက်ကတော့ ဆေးရုံကို ပို့ရတယ်”
ပြည်ကြီးတံခွန် ရဲစခန်းကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ တယ်လီဖုန်းဖြေဆိုသူ ရဲဝန်ထမ်းက မကြားမိကြောင်း ပြောဆိုတဲ့အတွက် မန္တလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို စုံစမ်းရာမှာတော့ တာဝန်ကျအရာရှိက အခုလိုအတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ အဲဒီအသေးစိတ်တော့ တက်မလာသေးဘူးခင်ဗျ။
အဲဒီမှာတော့ စက်ရုံတခုမှာ (၂)ယောက်သေတယ်လို့တော့ သိရတယ်။ ဒဏ်ရာရတာတို့ ဘာတို့တော့ ကျနော်တို့ လောလောဆယ် မသိရသေးဘူး။
လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ဆီက အဖွဲ့တွေ အဲဒီမှာ သွားပြီးတော့ ရှိနေကြပါတယ်”
ဒါကတော့ မန္တလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဖြေဆိုသွားတာဖြစ်ပြီး၊ ဒီပေါက်ကွဲမှု ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူတွေရဲ့အသေးစိတ်ကို သူတို့အနေနဲ့ အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း ပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေး ပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါဟုဆို
မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ပြည်ပ မီဒီယာတွေရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍဟာလည်း အစိတ်အပိုင်း တခု အဖြစ် ပါဝင်နေတယ်လို့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဌာနက ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
Conference on Media Development in Myanmar (Photos: DVB & Naw Say)
ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ညီလာခံ မှာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြန်ကြားရေးနဲ့ ပြည် သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ချုပ် ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြား လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတ် ၁၉ ရက်ကနေ
၂၂ ရက်ထိ ၄ ရက်ကြာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ညီလာခံကို ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး သိပ္ပံနဲ့​ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ ယူနက်စကို (UNESCO)၊ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့ (IMS) ကနေ ကြီးမှူး ကျင်းပနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း တတ်ရောက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မီဒီယာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ညီလာခံမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းသမားတွေနဲ့ အတူ ပါဝင် တက်ရောက် နေတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (ဒီဗွီဘီ) ချင်းမိုင်ဗျူရို အကြီး အကဲ ဦးတိုးဇော်လတ်ကို ဒီ ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒီပွဲကျင်းပဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်သူတွေ တက်ရောက်ပြီး ဘာတွေဆွေနွေး လဲ။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြပေးပါလား။
“အဓိကကတော့ ယူနက်စကို၊ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရယ်၊ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့ (IMS) တို့ မီဒီယာဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပေါင်းပြီး လုပ်တာပေါ့။ ဒီ
မနက်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော် ဆန်းက အဖွင့် အမှာ စကား ပြောသွားတယ်။ ပြီးတော့ ယူနက်စကိုက စကားပြောတယ်။ အာဆီယံမှာရှိတဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ကဗီတို့ ဘာတို့ ကပြောတယ်။
က မနေ့ကလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ပြောတာက အခုလာမယ့် မီဒီယာ၊ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ရေးဆွဲနေတဲ့ မီဒီယာဥပဒေကို အထောက်အကူ ပြုမယ်လို့လည်းပြောနေတယ်။
အဓိက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုပွဲကို လုပ်ရတာလဲ။
“မနက်ကတော့ အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို လုပ်သွားမယ် လို့တော့ ပြောပါတယ်။ အဆင့် ၃ ဆင့်မှာ မီဒီယာ ဥပဒေကို မူကြမ်းရေးဆွဲတာ လုပ်ဖို့ လည်း ပါတယ်။ နောက်တခုကလည်း သူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာတော့ တချို့ကို နိုင်ငံတော်ကနေ ပံ့ပိုးပေးမယ် မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပေါ့။ အဲဒါက နည်းနည်း အပြုသဘော ဆောင် ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ တပြိုင်တည်းမှာပဲ တချို့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တာကို လည်း ကာကွယ် ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ပြောတယ်။ အခု လက်ရှိကတော့ အချိန်တခုမှာ ဒီဟာကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လုပ်သလို တခုမှာလည်း မသေချာ သေးတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ မလိုလား အပ်တဲ့ မြန်မာလူမှု အဖွဲ့အစည်းကို အန္တရာယ် ကျရောက် နိုင်တာတွေကို အကာအကွယ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်လည်း ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရအနေနဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကို facilitate ပံ့ပိုးဆောင်ရွက် ပေးပါမယ်၊ ဆိုတာတော့ အပြုသဘော ဆောင်ပြီး ပြောသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။”
ပြည်ပမီဒီယာတွေကိုကော အာမခံချက်ပေးတာမျိုးတွေ၊ ဘာတွေပြောတာမျိုး ရှိလဲ။
“အာမခံချက် ဆိုတာထက် တိုးတက်မှုအနေနဲ့ ဥပမာ – က၀ီ ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ က နာမည် ပျက်စာရင်း (blacklist) လုပ်ထားတယ်။ အခု ဒီကို ရောက်လာတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အရင် ပြည်ပ မီဒီယာတချို့ ဧရာဝတီ၊ မဇ္ဈိမ၊ အာအက်ဖ်အေ၊ အရင်တုန်းက ဆိုရင် ပြည်ပမီဒီယာတွေက၊ အခု လုပ်ငန်းစဉ်တွေ မှာ ပါတနာ အနေနဲ့ ပါလာတာကို တိုးတက်မှု
၀န်ကြီး ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားတဲ့ သဘောလား။
သူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြောသွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ညွှန်ချုပ် ဦးရဲထွဋ်က ပြောတဲ့ အထဲမှာ ဒီပါတနာကိစ္စကို ပြောသွားတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဘာပဲပြောပြော လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် တခု အနေနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ထဲ ပါနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီဟာရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍကတော့ အစဆိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တော့ မသိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပမီဒီယာတွေ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အခု မီဒီယာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ အစိတ်အပိုင်း တခုအနေနဲ့ ပါနေတယ်လို့တော့ ထည့်သွင်းပြောသွားပါတယ်။ ၀န်ကြီးပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ဦးရဲထွဋ်က ဒီမနက်မှာ ပြောသွားတာပါ။”
ပြည်တွင်းက မီဒီယာတွေကော ဒီညီလာခံမှာ အကုန်ပါလား။
“ပြည်တွင်းက မီဒီယာ အကုန် ဆိုတာထက်တော့ ပါသင့်သလောက် ပါတယ်။ ဆရာဖေမြင့်၊ ဆရာမောင်ဝံသ၊ ကိုကို(စက်မှုတက္ကသိုလ်)နဲ့ ဆရာသီဟစောတို့ အပါအ၀င် တော်တော် များများ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော် ထင်ပါတယ် မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့၊ အဲဒီ့အတွက် နည်းလမ်းတွေက မျိုးစုံရှိတယ်။ ချဉ်းကပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ က အများကြီး ရှိတယ်။
အဓိက တခုက ownershipနဲ့ exclusive၊ inclusive ပေါ့။ ဒီ လုပ်ငန်း စဉ်ထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ မပါဘူး ဆိုတာ အရေးကြီးတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ပါအောင်လုပ်ပါတယ်။
ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး တခြား ဘာများထူးခြားတာ ပြောချင်တာရှိလဲ။
ပြောချင်တာတော့ ခုနက ပြောသလိုပဲ၊ ၀န်ကြီး ကိုယ်တိုင်ကိုက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ လုပ်နေတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ယူနက်စကိုကလည်း ယူနက်စကိုရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် တချို့ ပြောသွားတယ်။ ဥပမာ – မီဒီယာ လွတ်လပ်မှု ဖြစ်ရမယ်။ တိုင်းပြည်တခုမှာ လွတ်လပ်တဲ့ သတင်း မီဒီယာမျိုးရှိရမယ်။ ယူနက်စကို အနေနဲ့လည်း အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကူညီမယ် ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ အလားအလာ ကောင်းမယ် ဆိုတာမျိုးကို ၀န်ကြီး စကားနဲ့ပဲ ပြန်ပြီးတော့ အထောက်အကူ ဖြစ် အောင် ပြောသွားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါ ဒီမနက် အခင်းအကျင်းပေါ့။” ဒီဗွီဘီ သစ်ထူးလွင်